Useyinyama usomatekisi oheha ‘obasi bakhe’ nge-drink | IOL Isolezwe
Useyinyama usomatekisi oheha ‘obasi bakhe’ nge-drink
Isolezwe / 6 December 2012, 1:32pm /
UKUPHATHA kahle abagibeli komshayeli wetekisi uMnuz Dumisani Dimba sekumakhele ugazi kangangokuthi abagibeli sebeze babange ukugibela etekisini ayishayelayo.
Abagibeli abalayisha ekugcineni ubathengela iziphuzo njalo ngosuku nokwenza ukuthi wonke umuntu afune ukugibela etekisini yakhe.
Indlela aziphatha ngayo naphatha ngayo kahle amakhasimende kwenza abantu bamthande kakhulu.
UMnuz Dimba (41) uchaza lo msebenzi wakhe asewenze iminyaka emine njengomenelisa kunayo yonke aseke wayenza ngaphambilini.
Lo mshayeli waKwaXimba, eCato Ridge onguyise wezingane ezimbili ubazi ngamagama abagibeli bakhe kanti ubabiza ngobasi.
“Bangobasi bami ngoba yibona abenza ukuthi njalo uma kuphela inyanga ngihole,” kuchaza uDimba.
Echaza ngesenzo sakhe sokuthenga iziphuzo njalo ngokuphela kosuku uthe, lokhu ukwenza ngoba efuna ukujabulisa abasebenzi emuva kokuba bebe nosuku olude nolunzima emsebenzini. Akuyona into etheni kodwa uma ngibona ukumangala ebusweni babo, kuthi uma ngibabuza ukuthi bathanda hlobo luni lweziphuzo nokulandelwa ukumamatheka kwenza usuku lwami lube ngoluhle kakhulu,” kuchaza uDimba.
UDimba usethengele abagibeli iziphuzo ezingo-2 litre kusukela eminyakeni emibili edlule, isenzo esamangaza umgibeli waseThekwini owayeligibela okokuqala leli tekisi.
Ngesikhathi uDimba ema egaraji lika phethiloli uNksz Hloniphile Fakazi wazitshela ukuthi umshayeli uyogcwalisa uphethiloli.
“Kodwa wamane wabuza ukuthi ngabe sithanda ukuphuza hlobo luni lwesiphuzo, abantu baphendula ngokungananazi,” kuchaza uNksz Fakazi.
Uthi wazitshela ukuthi mhlawumbe kuyadlalwa wabuza nabagibeli ukuthi ngabe umshayeli uyazidlalela na. “Ilapho ngathola khona ukuthi yinto ayenza njalo uma eselayishe abagibeli bokugcina osukwini lwakhe,” kulandisa le ntokazi efunda izindaba emsakazweni womphakathi, Izwi Lomzansi.
UFakazi othi usegibele amatekisi iminyaka uthi, wamangala yisenzo sikaDimba nendlela aphatha ngayo abagibeli bakhe.
“Akafani nalaba bashayeli bamatekisi esibajwajele. Angisho ukuthi bonke bayafana kodwa akwejwayelekile ukuhlangana nomshayeli wetekisi obingelela aphinde ahloniphe abagibeli bakhe, angiyiphathi-ke eyokubathengela u-drink,” kusho uFakazi.
UDimba usethandwa ngale ndlela yokuthi abanye abagibeli sebeyawayeka amanye amatekisi balinde eyakhe. – Intatheli yeSolezwe